Tag: wordse cse | Martech Zone
Tag: wordse cse
Jimco, Juun 24, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Cusboonaysiinta: Waxaan soo saaray Widget Sidebar ah si aan u muujiyo Macluumaadka Qorahaaga. Qoraalka maanta ee Jon Arnold wuxuu ahaa mid cajiib ah talooyin ku saabsan qaabeynta degel, laakiin waxaan dareemay faallooyinkii ugu horreeyay ee aniga igu sifeeyay boostada. Taasi waa calaamad sheekeyn ah waxaan u baahanahay inaan uga dhigo qoraaga macluumaadkiisa mid caan ah. Uma abuurin widget tan (waana la yaabay in cid kale aysan haysan!), Laakiin waxaan awooday inaan ku saxo dhinacyadayda boggeyga WordPress.
Ku beddel Raadinta WordPress adigoo adeegsanaya Google Custom Search
Isniintii, September 15, 2008 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Aynu wajahno, Raadinta WordPress waa mid gaabis ah oo aan sax ahayn. Mahadsanid, Google labadaba si dhakhso leh ayeyna u socdaan. Intaas waxaa sii dheer, Raadinta Google ee Google ee loo yaqaan 'Custom Custom Search' ayaa loo beddelay in lagu dhex daro bartaada internetka (ama websaydhka). Permalinks iyo Google Custom Search Raadinta goob leh permalinks sida tayda, waa inaan sameeyaa hal badal dheeri ah, in kastoo. Waxay ahayd inaan ku sameeyo ficilka foomka calaamadeynta halkii aan siin lahaa URL oo dhan